May | 2009 | The World of Pinkgold
Posted on May 18, 2009 by cuttiepinkgold
Photofunia မှာ သွား ကလိထားတဲ့ ပုံလေးတွေပါ.. ရောက်လာသူအပေါင်းကို အမြင်နဲ့ နှိပ်စက်ချင်တဲ့ စိတ်ပေါ်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။
Filed under Trip and Photos and tagged photo |	7 Comments
Posted on May 16, 2009 by cuttiepinkgold
ဒါက ကျွန်မရဲ့.. Original ပုံပါ..
သူငယ်ချင်း မလေးမေက သူ့ရဲ့ အစွမ်းအစတွေနဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့
အပေါ်က ပုံလေးအတိုင်း ဖြစ်သွားတယ်… အရမ်းမိုက်တယ်နော်…။
ကျွန်မက ပန်းချီတွေကို ချစ်တယ်.. ကိုယ်တိုင်သာ ပန်းချီမဆွဲတတ်တာ.. ပန်းချီဆွဲတတ်တဲ့သူတွေကို အရမ်းလေးစားတယ်။ သူတို့ ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာကို အားကျတယ်.. ခံစားတယ်။ အရောင်တွေ ပေါင်းစပ်မှုကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ စုတ်ချက်တွေနဲ့ ဖန်တီးတဲ့ အနုပညာကိုသာမက ကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်တဲ့ Digital Art ကိုလည်း အရမ်းကြိုက်တယ်။ ကျွန်မပုံတူကို ဆွဲပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း မလေးမေ ကိုလည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူက ပန်းချီဆရာမ တစ်ယောက်ပါ။ သူ ဖန်တီးထားတဲ့ ဖန်တီးချက်တွေကို Days of Demon Misty ဆိုတဲ့ ဘလောဂ့်လေးမှာ ခံစားနိုင်ပါတယ်ရှင်။
ကျွန်မလိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ပုံတူလေးတွေ ဖန်တီးဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ကျွန်မ သူငယ်ချင်းကို ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရှင်။ ဈေးကလည်း အလွန်သက်သာပါတယ်။ မြန်မာငွေ နှစ်ထောင် ထဲရယ်ပါရှင်။
ကိုယ်တိုင်သိမ်းထားဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူများတွေရဲ့ ပုံတူတွေကို သိမ်းထားချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မလေးမေကို ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
Filed under Trip and Photos and tagged Digital Art, Portrait |	8 Comments
The Nargis Nightmare!
နာဂစ်…. မနှစ်တုန်းက ဒီလိူအချိန်မှာ မုန်တိုင်းတိုက်မယ်လို့ ကြေငြာထားပေမယ့်.. ရာသီဥတုက သာယာနေတုန်းပဲ.. ညဘက်မှာတော့ နာဂစ်ဟာ တစ်ကယ်ပဲ ရောက်လာခဲ့ပြီး.. မြန်မာပြည်ကို ငရဲဘုံဖြစ်စေခဲ့တယ်။ လူ့အသက်တွေကို ခြွေယူခဲ့တယ်။ စည်းစိမ်တွေ ပြုတ်စေခဲ့တယ်။ ဆိုးဝါးတဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတွေဟာ မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ ညတွေကို ခဏခဏ နှောင့်ယှက်ပြီး အထိတ်တလန့်နဲ့ နိုးထစေခဲ့တယ်။ ခုတော့ တစ်နှစ်တောင် ပြည့်သွားပါပြီကော။
မနှစ်တုန်းက မြင်တွေ့ရတဲ့ ရန်ကုန်ငရဲဘုံကို မျက်စိထဲက မထွက်သေးဘူး။ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လှူဒန်းခဲ့တဲ့ ဒေသတွေက ဆင်းရဲမှုတွေဟာ ကျွန်မကို ၀မ်းနည်းစေတုန်းပဲ။ အိမ်ယာမဲ့တွေရဲ့ သနားစရာ အဖြစ်တွေအတွက် ကြေကွဲမှုဟာ လတ်ဆတ်နေတုန်းပဲ။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှတွေဟာ စေ့စေ့တွေးစရာမလိုပဲ ရေးရေး ထင်တုန်းပဲ။ ဒီတစ်သက် ဒါမျိုးအဖြစ်ဆိုးတွေ နောက်တစ်ခေါက် မလာပါနဲ့တော့။ မကြုံပါရစေနဲ့တော့။ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေ မြန်မာပြည်ကို သနားသဖြင့် စောင့်ရှောက်တော် မူကြပါ။
နာဂစ်ဒါဏ် ခံရသူတွေကို ကျွန်မတို့ လုပ်နိုင်သလောက်၊ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒုက္ခကြုံနေရသူတွေကို ကိုယ်တိုင်နှစ်သိမ့်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပက အလှူရှင်တွေရဲ့ စေတနာတွေကို သူတို့တွေ ရင်ဘတ်ထဲသို့ ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းခဲ့ရခဲ့တယ်။ နာဂစ်ကြောင့်တွေ့တဲဒုက္ခ၊ နာဂစ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ၀မ်းနည်းမှု၊ နာဂစ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေဟာ ခုချိန်ထိ ပြန်လည်အစားထိုး ပြုပြင်ဖို့ အတော်ကြီးကို လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ ဘာပဲပြောပြော နာဂစ်ရယ်… တွေးမိတိုင်း ဆို့တက်လာတဲ့ ၀မ်းနည်းမှုတွေဟာ ဒီတစ်သက်မှာတော့ ပျောက်နိုင်တော့မှာကို မဟုတ်တော့ပါဘူး။
နာဂစ်မှတ်တမ်းများ………… (ပုံများကို ဘာညာမှ ထောက်ပံ့ပါသည်)
Related Link : One Day at Day Da Yea
Donation at Kun Chan Kone
Advantages of Nargis
Filed under Nargis and tagged Nargis |	Leaveacomment